Iindaba- Kutheni iKangyuan's Laryngeal Mask Airway?
I-Laryngeal mask airway (LMA) yimveliso esebenzayo ephuculwe phakathi kwiminyaka ye-1980 kwaye isetyenziswa kwi-anesthesia ngokubanzi ukuseka indlela yomoya ekhuselekileyo. Indlela yokuhamba yomoya yelaryngeal enomgangatho olungileyo ineenzuzo ezininzi, ezinje ngokulula ukuyisebenzisa, inqanaba lokuphumelela okuphezulu kokubekwa, ukungena komoya okuthembekileyo, ukukhuthaza okuncinci, ukuthintela ukonakala emqaleni kunye ne-tracheal mucosa. Kodwa ukwahlula njani umgangatho we-LMA? Namhlanje, thatha indawo yokuhamba imaski yokugcoba i-Kangyuan ngesabelo sentengiso esiphezulu njengomzekelo wokuchaza indlela yokugweba umgangatho wemaski yomoya ye-laryngeal evela kwezi zinto zintathu zingezantsi.
Ekuqaleni: Imathiriyeli yeLaryngeal Mask Airway
Umbhobho ukhutshiwe ngesilicone esomeleleyo esicocekileyo esenziwe ngeplatinam, kukwinqanaba lezonyango elubala kakhulu, ukuhambelana okungafaniyo kunye nozinzo olomeleleyo. Umphezulu ugudile kwaye awuzukufumana tyheli ngaphambi komhla wokuphelelwa. Ukugoba kombhobho kungqinelana nobume bomzimba womntu.
Isikhafu senziwe ngomatshini wokubumba ngenaliti kunye nempompo yokuxuba enamandla yento engamanzi engamanzi engamanzi eyenziwe ngeplatinam, inozinzo olomeleleyo, umphezulu othambileyo kunye nokugudileyo, ukunxibelelana ngokukhululekileyo nezigulana.
Isibini: Iinkqubo zeMveliso
Isigqumathelo se-laryngeal se-Kangyuan senziwa ngokuzimeleyo liqela leKangyuan ngo-2005 kwaye sabekwa kwimveliso emva kovavanyo olungqongqo. Inamalungelo awodwa omenzi wechiza kwaye inezibonelelo ezingenakuthelekiswa nanto xa kuthelekiswa nezinye izigqubuthelo zobuso. Inkqubo esisiseko imi ngolu hlobo lulandelayo:
1) abicah izinto ekrwada ukuxuba: ngqo evulekileyo ukuxilongwa izinto umatshini ukuxuba ukuqinisekisa nokuba ukuxuba, kwaye usebenzise amaza uguqulelo chiller amanzi ukulawula ubushushu okupholisa.
2) Ukukhutshelwa kwetyhubhu: izixhobo ezizenzekelayo zokuchaneka okuzenzekelayo ngomlinganiso we-laser ubukhulu kunye nomsebenzi wokusika ozenzekelayo wamkelwe ukuqinisekisa ubungakanani obuchanekileyo nobulawulwayo be-Kangyuan laryngeal mask airway.
I-3) Inaliti yokubumba inaliti: kusetyenziswa umatshini wokubumba wenaliti ozenzekelayo ogcweleyo ngokuzenzekelayo, impompo yokuxuba izinto ezinamandla, isenzo sokulawula izixhobo ezincinci kunye neeparameter.
4) Cuffing nisondeze: izixhobo ngokupheleleyo oluzenzekelayo esetyenziselwa ukuqinisekisa ukuba iglu isetyenziswa ngokulinganayo.
5) Ukuprintwa kweTyhubhu: Kuyasetyenziswa inki yokomisa ngonyango, ukuprinta akunabungozi kwaye akuwi.
6) Dibanisa ityhubhu kunye nekhafu kwaye uyikrobe iglu: yenza unxibelelwano phakathi kwetyhubhu kunye nekhafu ilungelelane kwaye igqithise, ngaphandle kokungena.
7) Hlanganisa ikhofu ebonisa.
Ukuhlolwa kweNkangeleko: I-LMA iya kuhlolwa ngesandla.
9) Ukufunyanwa kokuvuleka kwekhafu: thambisa i-capsule i-1.3 amaxesha ovavanyo lwamanzi ukubona ukuba iyavuza na.
10) Coca kwaye womile.
Isithathu: Iindidi zemaski yokuhamba yomoya
Inkqubo echanekileyo ye-Kangyuan laryngeal mask imisela ubuchule bayo. Emva kweminyaka eli-15 yokubhaptizwa emarikeni kunye nemvula, Kangyuan uye igama elihle kwiimarike yaseYurophu, American kunye mpuma Asia. Ukongeza, i-Kangyuan iphuhlise inani leemaski zelaryngeal ezineziphumo ezahlukeneyo zezigulana ezahlukeneyo, njengenye indlela esemgangathweni yendlela yokugcoba imilebe yomoya, enye indlela eqinise imask yomoya (ityhubhu yokungenisa umoya inokujikeleza kwii-angles ezininzi ngaphandle kokutyumza okanye ukinking) , imask yokuhamba yomoya enemigca ye-epiglottis (ukuthintela naluphi na uhlobo lwe-reflux), iindlela ezimbini zokuqinisa imaski yomoya, imaski yomoya ye-laryngeal, njl.